Tartan orod ah oo lagu xusayay maalinta ciyaartoyda Soomaaliyeed oo Muqdisho lagu qabtay (Sawiro) – Radio Daljir
Abriil 5, 2019 10:57 b 0
Wasaarada ciyaaradaha ee xukuumada Soomaaliya oo kaa shanaysa mamaulka gobolka Banaadir iyo xiriirka ciyaaraha fudud ayaa maanta si toos ah waxa ay udaah fureen tartanka orodka oo lagu maamuusayay maalinta caalamiga ah ee ciyaartoyda Soomaaliyeed.
Tartankan ayaa waxaa ka qayb galay 357 dalinyaro ah oo kala matayay 17ka degmo ee gobolka Banaadir, waxaana goob joog ka ahaa orod yahanka Soomaaliyeed ee caanka ah Cabdi Bile Cabdi.
Dhalinyarada ayaa orday masaafo gaaraysay 3kmtr.
Cali Iidoow Xasan oo kaalinta koowaad ku guulaystay tartankii orodkan ahaa ee maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in uu aad ugu farax san yahay heerka uu ka gaaray tartanka uuna hiigsanayo halkii uu gaaray ciyaaryahan Cabdi Bile Cabdi.
Orodyahanka Soomalaiyeed ee Cabdi Bile Cabdi oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in dhalinyarada loo baahan yahay in lagarab istaago shacab iyo dowladdba si looga jiheeyo maan dooriyaha iyo in loo adeegsado maskaxdooda fikirka xagjirnimada.
Wasiirka wasaarada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Soomalaiya Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in tartankan uu qayb ka yahay dhiiri galinta dhalinyarada iyo Nabada .
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo kamid aha ms,uuliyiintii tartankan ka qayb gayshay ayaa sheegay in arintan ay daliil utahay amniga magaalada Muqdisho ka jira iyo sida ay uga soo kabanayso dhibaatooyinkii ay soo martay.
Tartankan ayaa markii uu soo iidlaaday waxa ay mas,uuliyiinta abaalmarino ay goobta ku gudoonsiiyeen dhalinyardii tartanka ka gashay kaalmaha koowaad labaad iyo saddaxaad.
Dowladda oo Al-shabaab kala wareegtay deegaano katirsan degmada Jamaamme